Keypad ine LED Mabhatani - Nyowani Apple Patent | TeraNews.net
Keypad ine LED Mabhatani - Nyowani Apple Patent
Munyori Nikitin Eugenius Yakabudiswa pa 03.01.2021
Zvinoshamisa kuti maChinese haana kufunga izvi, anotengesa zvigadzirwa zvePC zvinodhura pasirese. Mushure mezvose, mamirioni evatengi akatenga maChinese keyboards ane hieroglyphs muzvitoro zvepamhepo. Uyezve - ivo vakaumba zvitambi nemutauro unodiwa wekuisa. Iyo keyboard ine LED mabhatani iri nyowani Apple patent. Zviri nyore kwazvo kugadzira mazana ematanho eUSD zvikwere. Uye uzviise pane iwo mabhatani ekhibhodi. Uye, kana zviwanikwa zvePC zvichipokana, saka kumalaptop mhinduro yakadaro haifungiki sekuve kuri kudiwa.
Iyo patent pachayo inosanganisira zvinopfuura mwenje bhatani re LED. Inotsigira akawanda-kubata, kumanikidza kupindura uye tactile mhinduro. Izvo zvakanaka. Fungidzira laptop ine zvese izvi matekinoroji kana mutambo wemitambo Nechekare izvozvi ini ndoda kutenga gadget rakadai, kuzvijairira ini pachangu uye kunakirwa zvese zvakanakira yezana ramakumi maviri nemasere.
Seyakafungirwa nevanogadzira Apple Corporation, kiyi yega yega ichave diki LCD skrini. Inogona kunge iri OLED, semuenzaniso. Kana tekinoroji yakafanana. Mabhatani anofanirwa kuve akajeka. Izvi zvinoreva kuti hwaro hwemakiyi igirazi, ceramics kana safaya.
Ndiani anoda keyboard ine LED mabhatani
Zviripachena kuti muchikamu chebhajeti zviri nyore kuisa zvitambi pamakiyi. Asi pakati nepremiamu chidimbu, mhinduro yacho inowana kuzvishandira pachayo.
Vasingaoni vanhu vanogona kuita kuti mavara ave makuru. Kana shandura backlight color. Nenzira, iyo yekupedzisira yekugadzika yatove kushingairira kushandiswa pasirese - backlit keyboards, semuenzaniso.
Iko hakuna kudikanwa kwekugadzira malaptop kune mamwe matunhu. ChiLatin, Cyrillic, hieroglyphs - muridzi anozvisetera khibhodi inodiwa.
Mumitambo, unogona kusarudza makiyi ekutonga. Kusvika padanho rekuisa iwe pikicha inoratidza kushanda kwebhatani.
Izvozvowo zvinogona kuitwa kune vanogadzira, mapurogiramu uye vanhu vanoshanda nemifananidzo uye vhidhiyo zvemukati.
Keypad ine LED mabhatani inhanho mune ramangwana. Kana iwe ukaita zvese nemazvo, iwe unogona kuwana inotonhorera mhedzisiro. Tichifunga nezve chiitiko chaApple mukugadzirwa kwetekinoroji yekombuta, ipapo panenge pasina kukanganisa. Nyika ichakurumidza kuona nyowani nyowani pamusika uye woatora iwo mukutenderera.
Pane chete kudzoreka kweiri patent. MaChinese anogona kutemerwa masanctions kana vakapa mhinduro dzakachipa nemabhatani eLED pamusika wavo. Ndokunge, iro chete zita reApple richava nekhibhodi yakadaro, uye mutengo wayo unenge wakakodzera. Tichagara tichigutsikana nekutamba chete zvisarudzo zvakakomba zvigadzirwa zveTaiwanese.